शिष्य अपराधी बन्दा आफूले कोर्रा खाने महान् गुरु चन्द्रधर (पौराणिक कथा) | Nepal Desh
Home साहित्य शिष्य अपराधी बन्दा आफूले कोर्रा खाने महान् गुरु चन्द्रधर (पौराणिक कथा)
शिष्य अपराधी बन्दा आफूले कोर्रा खाने महान् गुरु चन्द्रधर (पौराणिक कथा)
डा. माधवप्रसाद पाण्डे
बाबु तिम्रो शिक्षा पूर्ण भइहाल्यो अब तिमी आफ्नो घर फर्क ।’’ आचार्य दिव्याङ्गले पाउमा परेका शिष्य चन्द्रधरको मस्तकमा प्रेमपूर्वक हातले सुमसुम्याउँदै भने । चन्द्रधरका आँखा हर्षाश्रुले भरिए ।
चन्द्रधरले भने— ‘‘गुरुदेव मलाई गुरु दक्षिणाको आदेश दिएर कृतार्थ तुल्याउनुहोस् । कृपया मलाई आचार्य ऋृणबाट मुक्ति मिलोस् ।’’
आचार्य दिव्याङ्ग चन्द्रधरको गुरुभक्ति र प्रतिभामा मुग्ध थिए । आचार्यले भावविभोर भएर भने— ‘‘वत्स मैले गुरु दक्षिणा पाइसकेको छु । तिमी प्रसन्न भएर घर फर्क ।’’ चन्द्रधर यो कुरा कसरी मान्न सक्थे ? उनले आग्रह गरे- ‘‘होइन गुरुदेव दक्षिणा नलिई मलाई शान्ति र सन्तोष हुने छैन । दया रहोस् ममाथि ।’’
आचार्य दिव्याङ्ग शिष्य चन्द्रधरको दृढतामा गदगद थिए । आचार्यले भने – ‘‘बाबु म तिम्रो भक्ति र सेवाले अत्यन्त प्रशन्न छु । तिमीले यस विषयमा रत्तीभर पनि सङ्कोच मान्नुपर्दैन ।’’
चन्द्रधरले विनयपूर्वक हात जोड्दै – ‘‘भने होइन गुरुदेव आफ्नो अनुग्रहबाट मलाई वञ्चित नगर्नुहोस् र मलाई केही आज्ञा दिनुहोस् ।’’
चन्द्रधरको पटकपटकको आग्रहबाट आचार्य दिव्याङ्गको मुखमण्डल गम्भीर भयो । निधारमा चिन्ताका रेखाहरू देखिए । उनको मानसपटलमा दक्षिणा सम्बन्धी विचारहरू उठ्न थाले । कुनै साधारण विद्यार्थी भए त्यसलाई जे पनि भन्न सकिने थियो तर आचार्य चन्द्रधरको विद्याबुद्धि अनुसार नै उनीसँग दक्षिणा माग्न चाहन्थे । उनी केही बेर आफूमा नै हराए । त्यस बेला चन्द्रधर तीव्र उत्सुकताका साथ गुरुदेवको मुखमण्डलमा देखा पर्ने र विलीन हुने भाव रेखाहरूको अध्ययन गर्दै थिए ।
अन्तमा आचार्य दिव्याङ्गले आदेश दिए – ‘‘ठीक छ चन्द्रधर तिमीबाट गुरु दक्षिणा लिन्छु । चन्द्रधरले गुरु दिव्याङ्गका चरणहरूमा शीर राख्दै निवेदन गरे – ‘‘कृपा रहोस् गुरुदेव ।’’
आचार्य दिव्याङ्गले गम्भीर वाणीमा भने तिमी मेरो दक्षिणास्वरूप अध्यापन कार्य गर । गुरु दक्षिणाको कुरा सुनेर चन्द्रधर हत्तप्रभ भए । गुरुदेवले आफूलाई उत्तरदायित्वको भारले दबाए जस्तो लाग्यो । वस्तुतः त्यस बेला अध्यापन कार्य आज जस्तो सरल थिएन । अध्यापक बन्नुभन्दा पहिले आफूमा विजय पाउनुपर्थ्यो । सुनझैँ खारिनुपर्थ्यो । गुरुले विद्या र चरित्र दुवै क्षेत्रमा आफ्नो आदर्श स्थापित गर्नुपर्थ्यो । विद्यालाई भन्दा बढी चरित्रलाई प्रधानता दिइन्थ्यो ।
शिक्षाको उद्देश्य बुद्धि विकास मात्र नभएर चरित्र निर्माण थियो । गुरु आफ्ना शिष्यका लागि आमा र बाबु पनि हुन्थे । विद्यार्थी गुरुको आश्रममा रहेर सम्पूर्ण विद्याहरूको अध्ययन गरी स्वावलम्बी बन्दथे । शिक्षा समाप्तिपछि आजका गुरु र शिष्यको सम्बन्ध जस्तै समाप्त हुँदैनथ्यो । गुरुले आफ्ना शिष्यका जीवनका प्रत्येक कार्यका लागि उत्तरदायी हुनुपर्दथ्यो । शिष्यको प्रत्येक भूललाई गुरुले आफ्नै भूल मान्दथे र त्यसका लागि प्रायश्चित्त गर्दथे ।
चन्द्रधरले तुरन्त उत्तर दिन नसक्दा आचार्य दिव्याङ्ग मुसुक्क हाँसे । उनले भने – ‘‘किन बाबु गुरुदक्षिणा तिमीलाई ज्यादै भारी लाग्यो कि कसो ?’’ चन्द्रधर आफ्नो कुण्ठित अवस्थाले गर्दा लज्जित थिए । आफ्नो भाव लुकाउँदै उनले भने – ‘‘होइन गुरुदेव हजुरलाई गुरु दक्षिणा दिनेछु ।’’
आचार्य दिव्याङ्गले आशीर्वाद दिँदै सस्नेह चन्द्रधरको माथ सुम्सुम्याए । चन्द्रधर चरण स्पर्श गरी हिँडे ।
निर्जन वनमा नर्मदा नदीको तीरमा चन्द्रधरले आफ्नो आश्रम खडा गरे । आश्रमको एकातिर तुलसी र केराका बोट लगाएका थिए । अर्कातिर यज्ञकुण्ड निर्माण गरिएको थियो । आश्रमदेखि छुट्टै अलि पर गौशाला र छात्रावास बनाइएका थिए । प्रतिदिन यज्ञजन्य धूवाँले वनको वातावरण मोहक बन्दथ्यो । नर्मदाको स्निग्ध जलको तटमा पिपलको विशाल वृक्ष थियो । त्यसको चारैतिर माटाका वेदीहरू बनाइएका थिए । चन्द्रधर दिनदिनै त्यस वेदीमा बसेर छात्रहरूलाई पढाउने गर्थे । यस प्रकार शनैः शनैः धेरै वर्ष बिते । प्रकाण्ड विद्वान् चन्द्रधरको ख्याति चारैतिर फैलिन लाग्यो ।
एकाविहान चन्द्रधर आफ्ना शिष्यहरूलाई ‘‘एकोऽहं बहु स्याम’’ को पाठ बडो तन्मयताका साथ पढाइरहेका थिए । शिष्यहरू पनि एकाग्रचित्त थिए । त्यसै बेला गाई चराउन गएको एकजना विद्यार्थीले दौडँदै आएर भन्यो – ‘‘गुरुदेव आज श्वेतकेतुले दुई जना बटुवाहरूको हत्या गरी उनीहरूको धन लुट्यो ।’’
विद्यार्थी भयग्रस्त कण्ठले बोलिरहेको थियो । त्यो सूचना पाउँदा चन्द्रधरलाई आफ्नो मुखमा कसैले जोडसित थप्पड हाने जस्तो अनुभव भयो । उनी रन्थनिएर चुप लागे । किनकी श्वेतकेतु आजभन्दा चार वर्ष पहिलेसम्म चन्द्रधरकै छात्र थियो । ऊ जस्तो प्रतिभा सम्पन्न र गुरुभक्त विद्यार्थी उनले कुनै पाएका थिएनन् । चन्द्रधरको श्वेतकेतुप्रति सहज ममता थियो । त्यस छात्रबाट उनले केही आशा गरेका थिए । दुई वर्ष यतादेखि उसैले डाँकाको पेशा (दस्युवृत्ति) लिएको थियो । श्वेतकेतुको अत्याचारको खबर प्रतिदिन पाउन थालियो र त्यसको आतङ्क दिनानुदिन बढ्दै गयो ।
चन्द्रधर उसको दोषलाई आफ्नै दोष मान्थे र मनमनै आफूलाई असफल अध्यापक मान्थे । आजको यो घटना सुनेर उनको मन क्षुब्ध भयो । यद्यपि उनी शिष्यहरूलाई पढाइरहेका थिए, तर उनको मन अन्तै थियो उनी बारम्बार सोचिरहेका थिए— ‘‘के मैले गुरुदेवलाई दिएको दक्षिणा यही हो त ?’’
एक दिन भदौको अँध्यारो रात थियो । आकाश मेघाच्छन्न थियो । प्रतिक्षण बिजुलीको चमकले रात्रिको भयानकता बढाइरहेको थियो । चन्द्रधर आफ्नो कुटीबाट बाहिर निस्केर त्यस मार्गतिर अग्रसर भए जुन मार्गमा श्वेतकेतु डकैती गर्दथ्यो ।
चन्द्रधर निर्भीक भएर अगाडि बढ्दै गए । सहसा कसैले कड्केर सोध्यो – ‘‘को हो ? उनले भने – ‘‘म एक बटुवा हुँ । उनको उत्तरमा निर्भयता थियो ।
‘‘पर्खी । पुनः कर्कश स्वर सुनियो । चन्द्रधर रोकिए । ‘‘तेरा सबै सामान यहीँ राखिदे’’ – डाँकुले भन्यो । चन्द्रधरले नम्र तर निर्भीक स्वरमा भने – ‘‘दस्यु मसँग केही पनि छैन ।’’
दस्यु क्रुद्ध भयो । उसले कोर्रा हान्दै भन्यो – ‘‘पहिले सबै यस्तै निहुँ पार्छन् । दण्ड नदिएसम्म कोही पनि ठेगान लाग्दैन ।’’
चन्द्रधरले दस्युको कोर्रा हनाईमा रत्ती पनि बाधा पुर्याएनन् । उनी आफ्नो ठाउँमा हलचल नगरी अडिरहे । शरीरबाट रगत बग्न थाल्यो । यति हुँदा हुँदै पनि उनी शान्त र प्रशन्न थिए ।
दस्यु उनलाई निरन्तर कोर्रा हानिरहेको थियो । यस बेला बिजुली चम्क्यो । श्वेतकेतुले देख्यो पिटिने कुनै अर्को कोही मानिस नभएर उसैका गुरुदेव श्रीचन्द्रधर आचार्य रहेछन् । गुरुदेवको रक्त रञ्जित शरीरलाई देखेर दस्यु श्वेतकेतु स्तब्ध भयो ।
चन्द्रधरको मुखमण्डलमा गम्भीर शान्ति थियो । चन्द्रधरले हाँस्दै भने – ‘‘किन रोकियौ दस्यु, के तिमी थाक्यौ ?’’
श्वेतकेतुले गुरुका पाउमा परेर रुँदै भन्न थाल्यो – ‘‘गुरुदेव मलाई घोर दण्ड दिनुहोस् मबाट भयङ्कर अपराध भएको छ । मलाई कठोर दण्ड दिनुहोस् ।’’
चन्द्रधरले श्वेतकेतुलाई प्रेमपूर्वक उठाउँदै भने – ‘‘उठ श्वेतकेतु जे भयो त्यो ठीकै भयो । मैले तिम्रो जीवनको अमूल्य समयलाई आफ्नो छात्र बनाएर नष्ट गरिदिएँ । मैले तिम्रो प्रतिभालाई दिशा दिन सकिनँ । यस कारण मैले तिमीप्रति अपराध गरेको छु । मैले अझ अरु दण्ड पाउनुपर्थ्यो ।’’
श्वेतकेतु पश्चात्तापले निरन्तर रोइरहेको थियो । ऊ केही पनि भन्न नसक्ने अवस्थामा थियो ।
चन्द्रधर उसलाई आफ्नो छातीमा टाँँसेर आफैँ पनि रोए । एकातिर पानी बर्सिरहेको थियो । अर्कातिर गुरु र शिष्य आपसमा टाँसिएर रोइरहेका थिए । चन्द्रधर भनिरहेका थिए— ‘‘श्वेतकेतु मेरा शिष्यहरू सुध्रन्छन् भने आफ्ना प्रत्येक शिष्यहरूबाट यसभन्दा पनि धेरै कोर्राको प्रहार सहन म तयार छु ।’’
त्यसै बेला एउटा वृद्ध मानिस त्यहाँ आइपुगे । उनका जटा र दाह्री पानीले भिजेका थिए । उनले टाँसिएर रोइरहेका गुरु र शिष्यलाई छुटाए ।
वृद्ध पुरुषलाई चिन्नासाथ चन्द्रधरले प्रशन्नतापूर्वक चिच्याएर भने – ‘‘गुरुदेव हजुर यहाँँ ?’’ आकस्मिताले चकित थियो चन्द्रधरको स्वर । उनी श्रीगुरुका पाउमा परे । आगन्तुक वृद्ध आचार्य दिव्याङ्ग थिए ।
उनले उठाउँदै भने— ‘‘हो बाबु, म तिम्रो आचार्य दिव्याङ्ग नै हुँ । उठ, संसारमा तिमी जस्तै धेरै अध्यापकको खाँचो छ । मैले आज अपूर्व गुरुदक्षिणा पाएको छु ।’’
त्यसपछि कारणवश वा प्राक्तन संस्कारवश डाँकु बन्न पुगेका श्वेतकेतुको जीवनधारा फेरियो ।